ထူးခြားတဲ့ ဒို့မြန်မာ့ ဝိသေသ NAME | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ထူးခြားတဲ့ ဒို့မြန်မာ့ ဝိသေသ NAME
ထူးခြားတဲ့ ဒို့မြန်မာ့ ဝိသေသ NAME
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 12, 2010 in Community & Society, Cultures, Drama, Essays.. | 15 comments
ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့စဉ်းစားမိတာ ကြာပါပြီ။ လက်လှမ်းမှီသလောက် ဘယ်သူမှ အရေးတယူ လုပ်ရေးတာ မတွေ့မိလို့ နည်းနည်းတော့ အံ့ဩရပါတယ်။ ပြည်တွင်းနေ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မဆန်းပေမဲ့ ပြည်ပရောက်တဲ့အခါ ကို့ယို့ကားယားဖြစ်ရ၊ အခြားနိုင်ငံသားများအဖို့ အဆန်းတကြယ် နားလည်ဖို့ခက်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ ရှားရှားပါးပါး မြန်မာတို့ရဲ့ နာမည်ပေးပုံ စနစ်ပါ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာခလေးတဦး မွေးလာပြီဆိုရင် ၉၉%လောက်က မွေးတဲ့နေ့နံကိုက်ပြီး အမည်ပေး ပါတယ်။ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးလို့ မွေးစာရင်းမှာ အလွယ်ပေးလိုက်ရင်တောင် ကျောင်းအပ်တဲ့အခါ စိတ်ကြိုက်နာမည်ကို ဆရာသမားများနဲ့ တွက်ချက်ပြီး ပေးပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အားလုံးလိုလိုသော လူမျိုးများ အမည်တွေမှာတော့ မျိုးရိုး မိသားစုနာမည် တွေကို ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်မှာထားပြီး ကိုယ်ပိုင်အမည်နဲ့ တွဲမှည့်ပါတယ်။ ဥပမာ မိုက်ကန်းအောင်ပုဆိုရင် နောက်စာလုံး အောင်ပု (သို့မဟုတ်) ပုသည် မျိုးရိုးစာလုံးကို ဂုဏ်ပြုထိမ်းသိမ်းခြင်းကို ဆောင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ခေတ်မှီသူများ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ နာမည်ကြည့်ရုံနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝှာက ဆင်းသက်လာတာ သိနိုင်ခြင်းပါ။ မိုက်ကန်းချင်းတူပေမဲ့ နောက်စာလုံး အောင်ပုနဲ့ အောင်ရှည် လို့ကွဲရင် ဘာမှမတော်စပ် တခြားစီလို့မမေးဘဲနဲ့ သိပါတယ်။ ဥရောပ အာဖရိက အာရှ အားလုံးလိုလို ဒီလိုပဲ မှည့်ပါတယ်။ တရုတ်၊ ကိုရီးယားတို့ကတော့ ရှေ့စာလုံးကို မျိုးရိုးနာမည်အတွက် ယူပါတယ်။ (ကိုရီးယားတော့ သေချာတယ်) ကြားဖူးတာ တရုတ်တွေ ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းတက်ရင် သူတို့နာမည်တွေကို အရှေ့အနောက် ကွန်ပြူတာ စစ်စတမ်ထဲမှာ ပြောင်းပေးရတယ်လို့ ရိုးတိုးရိပ်တိပ် ကြားဖူးပါတယ်။ တရုတ်ကျောင်းသူ အတော်များများကတော့ ကျောင်းတက်တာနဲ့ မိမိနာမည်ရှေ့မှာ နှစ်သက်ရာ အင်္ဂုလိနာမည် တပ်တော့တာပဲ။ ဥပမာ – မေချောက်ဖုံဆို မေဘလင်းချောက်ဖုံပေါ့။
နာမည်ကိစ္စဟာ ဒီမှာတော့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ မိန်းမတွေ အိမ်ထောင်ပြု၊ လင်ဆုံးပြီး တကိုယ်ရည်သမား ဖြစ်သွားမှသာ ပြောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်တမျိုးကတော့ မဟုတ်တာ လုပ်ပြီး ကိုယ်ဘယ်သူမှန်း မသိအောင် နာမည်ပြောင်းတာဖြစ်လို့ အရမ်းသတိထားပါတယ်။ ပြောင်းချင်တိုင်း ပြောင်းမရပါ။ အမေရိကားမှာ ရွှေကိုကို ရွှေမမများ ဒေဗစ်တို့ ဂျက်ဆီကာတို့လို့ ရှေ့မှာအသစ်စာလုံး ပြောင်းတပ်ချင်ရင် နိုင်ငံသားခံတဲ့အထိ စောင့်ရပါတယ်။ နာမည်တခုလုံး အသစ်ပြောင်းရင်တော့ ပိုကြာ ပါတယ်။ ဒီကလူတွေအဖို့ မိဘပေးတဲ့ နာမည်ကိုပြောင်းလိုတာ ကျေနပ်လက်ခံပုံမရပါ။ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နာမည်ဆို သူတို့အမြင်မှာ ဘယ်လောက်ဆန်းလိုက်မလဲ၊ အိမ်ထောင်ပြုတော့လည်း နောက်ဆုံးစာလုံးကို ယောက်ျားမိသားစု နာမည်မပြောင်း၊ မူလနာမည်မှာ ကြတော့ ရှေ့နှစ်လုံးက ဖခင်ရဲ့နာမည်၊ တတိယစာလုံးက အဘွား၊ နောက်ဆုံးက မိခင်ရဲ့စာလုံး။
နာမည်နဲ့ဆိုင်လို့ အင်္ဂလိပ် အမေရိကန်လူဖြူတွေရဲ့ အချို့မျိုးရိုးမိသားစု နာမည်တွေကလည်း ရယ်ချင်စရာပါ။ မျိုးရိုးနာမည်မှာ Carr, Waters စတဲ့ နာမည်တွေကို တွေ့ရင် အင်္ဂလိပ်စကားပြော တိုင်းပြည်က မဟုတ်သူများအဖို့ ရယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သူတို့က စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ပြီး နာမည်တွေက အရင်ရှိတာ၊ အရာဝတ္တုအမည် မှည့်ခေါ်တာတွေက နောက်မှလိုက်တာလို့ ဖြေပါတယ်။ အတိအကျတော့ ကျနော်လည်း သုတေသန မလုပ်ဘူးလို့ မသိပါ။
နောက်တမျိုး မြန်မာတွေ ကြုံရတာ first name ရှေ့စာလုံးနဲ့ last name နောက်စာလုံးကို ဖောင်ထဲမှာ နေရာမှားတာပါ။ လျောက်လွှာပုံစံ အတော်များများမှာ နောက်စာလုံးကို အရှေ့ကွက်လပ်၊ ရှေ့စာလုံးကိုတော့ နောက်ကွက်လပ်မှာ ဖြည့်ခိုင်းပါတယ်။ သတိမမူမိလို့ ဖြည့်ရိုးဖြည့်စဉ် လုပ်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့နာမည်က ရှေ့နောက်လွဲ နေပါတော့တယ်။ ဥပမာ – ပန်းရွှေသည် ရှေ့နောက်နေရာမှားလို့ ရွှေပန်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ထုံးစံအရ လူတဦးကို လေးလေးစားစား ရုံးကဏ္ဍားဆန်ဆန် ခေါ်လျင် မျိုးရိုးမိသားစုအမည် ဒါမှမဟုတ် နာမည်အပြည့်အစုံ ကိုခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ မစ္စတာအောင်ပု ဒါမှမဟုတ် မစ္စတာမိုက်ကယ်အောင်ပုပေါ့၊ မိုက်ကယ်လို့ ရှေ့အဖျား ဆွတ်ခေါ်တာမျိုးကိုတော့ ရင်းနှီးမှ သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ နာမည်ချမ်းသာသူများအတွက် middle name အလယ်စာလုံးလည်းရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာတွေ များသောအားဖြင့်က့ အလယ်စာလုံးကို မဖြည့်တာ များပါတယ်။ ဖြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ရမဲ့ အိုင်ဒီကတ် စာရွက်စာတမ်းတွေမှာ မူလနာမည် အပြည့်အစုံ မဖြစ်ဘဲကျန်သွားဖို့များပါတယ်။ ဥပမာ- မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုအစား မိုက်ကယ်အောင်ပု ဖြစ်သွားပါတယ်။ နာမည်သုံးလုံးရှိသူများ ကတော့ အပြည့်အစုံ ပါချင်ရင် ရှေ့ဖြစ်ဖြစ် နောက်မှာဖြစ်ဖြစ် နှစ်သက်ရာ စာနှစ်လုံးကို တွဲထည့်ဖို့ သာရှိပါတယ်။ လျောက်လွှာမှာ ရှေ့နာမည်နဲ့ နောက်နာမည် အကြား ကော်မာခံထားရင် အရှေ့သည် မိသားစုနာမည် အတွက် အနောက်သည် ကိုယ်ပိုင်နာမည်အတွက်လို့ သိရပါတယ်။ ကော်မာခံမထားဘူး ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ရှေ့နောက် နာမည်အပြည်အစုံကို အစဉ်လိုက် ရေးချနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်တာရှိတဲ့ နောက်တမျိုးက ရှေ့နာမည်မှာ ဦးU၊ ဒေါ်Daw၊ မောင်Mg၊ မMa မှားတပ်မိ ကြတာပါ။ နောက်ဆက်တွဲကတော့ မူလ နာမည်တွေနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ထုတ်ပေးတဲ့ ကတ်ပြား၊ စာရွက်စာတမ်းပေါ်က နာမည်တွေ မကိုက်တော့ခြင်းပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဦး၊ဒေါ်ဆိုတာ အလွယ် ရှင်းလို့ရပေမဲ့ ပြည်ပမှာတော့ ဆောရီးပါပဲ။ ပတ်စ်ပို့မှာ ဦး၊ဒေါ်ပါသူတွေပြီး ပြည်ပနိုင်ငံ အိုင်ကတ်တွေ မှာကြတော့ ဦးဒေါ်မပါ အမှန်အတိုင်းဖြည့်ကြလို့၊ ပတ်စ်ပို့မှာတော့ ဦးဒေါ်မပါဘဲ ပြည်ပနိုင်ငံ အိုင်ဒီ စာရွက်တွေမှာတော့ ဦး၊ဒေါ်ပါသွားလို့ ရှုပ်ကြရှင်းကြ ရင်မောရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက ပြည်ပနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ဖြည့်ရင် ဦး၊ဒေါ်၊ ကို၊ မ ယဉ်ကျေးမှု အဆောင်အယောင် ဂုဏ်ပုဒ် တွေကို ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။ နာမည်များအားလုံး တထပ်တည်း ကျပါစေ။
မြန်မာပြည်မှာ မဆန်းတဲ့ ရှေ့နောက်နာမည် နှစ်ခုစလုံး တူတဲ့သူတွေဆို တော်တော်ရှင်းယူ ရပါတယ်။ ရုံးပြင်ကဏ္ဍားသွားလို့ လုံခြုံရေးမှာ ကိုယ့်အိုင်ဒီပြတဲ့အခါ မကြုံဖူးကြလို့ ရှင်းပြရ၊ အိုင်ဒီ မတာင်းလို့ နာမည်လေးပဲ မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ ဖြည့်ရပြန်တော့လည်း ပေါက်ကရ နာမည်ပေးသွား တယ်ထင်လို့ အိုင်ဒီတောင်းအကြည့်ခံရ၊ နှစ်ခါပြန်သုံးခါပြန် အစစ်ခံရနဲ့ ဒုက္ခများလှပါတယ်။ ကြုံလို့ ဆရာတဦးပြောတာဖူးတာ ကိုယ်ကြိုက်သလို နာမည်ပေးတာမျိုး ရုရှားနိုင်ငံ ဆိုက်ဗေးရီးယားမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုတခု မှာလည်းရှိတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ်ပိုင်စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ရှိတဲ့လူမျိုး တိုင်းမှာတော့ နာမည်ကို မိသားစုမျိုးရိုးနဲ့ ထိန်းကြပုံပေါ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေမှာ မိန်းခလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုလဲ နာမည်ပြောင်း စရာမလို၊ ကြိုက်သလိုပေးနိုင်၊ ကြိုက်သလိုလည်း ပြောင်းခွင့်ရှိတာမို့ ကမ္ဘာမှာ နာမည်အခွင့်အရေးအရှိဆုံး လွတ်လပ်စွာ နာမည်မှည့်ခေါ်ပိုင်ခွင့် အရှိဆုံး တိုင်းပြည်ရယ်လို့ ဝင့်ကြွားဂုဏ်ယူ သင့်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လဲဂုဏ်ယူသွားပါတယ်…. 林荣泉
ဒီကိစ္စ တော်တော်တိုင်ပတ်ဖူးတယ် .. အဲဒီထက်ဆိုးတာကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ဗမာနံမည်တွေကို ဘယ်သူမှ အသံမထွက်တတ်တာပဲ …
အဟီး..အနော်လဲ ..ကလေးရရင် နံမယ်ဘယ် လိုပေးရင်ကောင်းမလဲ..လို့စင်းစားလိုက်အုံးမယ်..ဟဲ..ဟဲ
ID လို့အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေတဲ့ identification ဟာအနောက်နဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအတော်သတိထားပြီးေ၇းကြီးခွင်းကျယ်လုပ်နေ၇တာအတော်ကြာပါပြီ။ ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အမေ၇ိကန်နိုင်ငံမှာ 2010 Census သန်းခေါင်စာ၇င်ကောက်ယူတာနဲ့ဆက်စပ်ပြီးမောင်မိုးညိုဆောင်းပါးတခုမန္တလေးဂေဇက်မှာေ၇းဘူးပါတယ်။ အမည်ပြောင်းတာအမည်ပေးတာ ဟာ first country လို့ခေါ်တဲ့အမေ၇ိကန်မပြောပါနဲ့စင်္ကာပူ နဲ့ ဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေမှာတောင် အတော်အလေးထား၇တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေမှာ အမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်၇တာ နဲ့ first world မှာနံမယ်တပ်၇တို့၇ဲ့ကွာခြား၇ခြင်းအဓိကအကြောင်းအချက်ကတော့ – အမည်တခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးဥပဒေကြောင်းသတ်မှတ်ချက် (legal status) နဲ့ခံစားခွင့် (benefits) ဆိုကြတဲ့လူနေမှုစနစ်၇ဲ့သတ်မှတ်ချက်ကြောင်းလို့ယူဆပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာလဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်လေးငါးဆယ်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံလိုဘဲနေမှာပေါ့။ေးဒဗစ်ဘဲပေးပေး၊ ဗစ်တိုး၇ီးယားဘဲမှဲ့မှဲ့ ဖြစ်နေတာပါဘဲ။ နောက်တော့လင်မယားတ၇ားဝင်မှခံစားခွင့်၊ ပင်စင်ခံစားခွင့်၊ အမွေဆက်ခံခွင့်၊ နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြော၇၇င် လင်မယားဖြစ်တဲ့အတွက်အခွန်သက်သာခွင့်၊ အာမခံသက်သာခွင့်ဆိုတဲ့discounts တွေအသီတသန်းကြီး၇နိုင်တော့၊ နံမည်ဟာအေ၇းပါအ၇ာေ၇ာက်တဲ့ကဏ္ဍထဲေ၇ာက်သွားတာမဆန်းပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင် မြို့ပြဒေသတွေနဲ့ခုအချိန်နယ်ဘက်တွေပါမိဘအမည်ကိုနောက်ကဆက်တွဲထဲ့တဲ့ခေတ်စားလာပြီလေ။ “သန္တာနေ၀င်း”တို့ “လဲ့လဲ့ဝင်းဖေ”တို့ကိုကြည့်ကြပါ။ မောင်မိုးညိုေ၇ာက်ခဲ့တဲ့နယ်တွေမှာ ခွဲစိပ်မွေးပေး၇လို့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေတောင်”မောင်မိုးညို”တွေဖြစ်ကုန်ကြတာတေအများသာွး့၇ပါတယ်။(ကလေးကင်ပွန်းတပ်မှာပြောပြလို့သိ၇တာ)။ အူဝဲဆိုပြီးမိခင်ဝမ်းကကျွတ်တဲ့အချိန်သဘာဝနေအလင်းေ၇ာင် (သို့) လအလင်းေ၇ာင်ကို “လက်”ကနဲကလေးကမြင်လိုက်ချိန်ကိုအတိအကျကိုက်ပြီးေ၇းခေတ်ဟူးေ၇းဟူး၇ာများကအဲ့ဒီကလေး၇ဲ့ဘ၀၇ပ်တည်၇ှင်သန်ကြီးထွားေ၇း။ အနာေ၇ာဂါကင်း၇ှင်းပြီးကြီးပွားေ၇းတို့အတွက် အမည်နာမမှဲ့ပေးကြပါတယ်။ ဂြိုဟ်စီးဂြိုဟ်နင်းများ၇ဲ့အားနဲချက်သာချက်တွေကိုပြန်ပြီး၊ဟန်ချက်ညီပေးမဲ့အမည်နာမဟာအဲ့ဒီကလေးအတွက်အလွန်ေ၇းပါအ၇ာေ၇ာက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဘဲအယူ၇ှိခဲ့ကြပါတယ်။ ခုချိန်ထိတောင်မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေမှာအမည်ပေါ်မူတည်ပြီးဥပဒေ၇ဲ့ကြိုးကြောင်းလိုက်နာခြင်း၊ ခံစားခွင့်ကွာခြားခြင်းတို့ဟာသက်ေ၇ာက်တည်မှီခြင်းမ၇ှိသေးပါဘူး။ ဒါဟာအမည်ပေးအမည်မှဲ့ခေါ်ခြင်းကိုလွတ်လပ်စေတဲ့အကြောင်းတ၇ပ်ပါဘဲ။ ခေတ်ကိုလိုက်ပြီူးအမည်ပေးတဲ့ေ၇စီးကြောင်းပြောင်းလာတာကိုသတိပြုမိကြဘို့လိုပါတယ်။ ဝေဒဟူးေ၇းဟူး၇ာများ၇ဲ့အကြံပြုချက်များကဒုတိးဦးစားပေးအဆင့်ကိုေ၇ာက်မှန်းမသိေ၇ာက်လာတာကိုလဲဝမ်းနဲ့ဘွယ်တွေ့၇ပါတယ်။ နံမယ်၇ဲ့ပထမစကားလုံးကနေ့နံသင့်၇င်ဘဲ ok တဲ့ခေတ်ကိုေ၇ာက်မှန်းမသိေ၇ာက်နေပြီမဟုတ်ပါလား။
(မှတ်ချက် – တခုတော့အကြံပြုပါ၇စေ…”မောင်ဘားမား”လို့တော့မမှဲ့မိပါစေနဲ့။ ပြဿနာမီးခိုးကြွက်လျှောက်လိုက်လာနိုင်စ၇ာ၇ှိလို့ပါ။)
(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာခလေးတဦး မွေးလာပြီဆိုရင် ၉၉%လောက်က မွေးတဲ့နေ့နံကိုက်ပြီး အမည်ပေး ပါတယ်။ )
အဲ့သည်နေရာမှာ အမည်ပေးတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေအနေနဲ့ မင်္ဂလာ လို့ ဆိုပြီး သတ်မှတ်တာဟာ ဗုဒ္ဓ ရှင်တော်ဘုရား၏ အဆို အဆုံးမ မှနေ၍
ဗြဟ္မဏ အယူကို ခွဲထွက်သွားကြတယ်ဆိုတာကို အနီးငယ် သတိချပ်ကြပါစေလိုကြောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တော်မြတ်၏ မည်သည့် အမည်နာမသည်မျှ
နေ့ နာမ် ဖြင့် မကိုက်ညီကြောင်း (ဥပမာ သိဒ္ဓတ္ထ ၊ ဂေါတမ) သို့ သော် ဘုရားရှင်ကိုပင် ဗေဒင် ဆရာတို့ ဘုရားဟူ၍ သိနှင့်ကြကုန်သည်ကိုလည်း ဗေဒင် ပညာကို တစ်စေ့တစ်စောင်း သတိတန်ရာပြီပါလျှင် ခေတ်ကာလတို့ ၏ အနေအထားပေါ် မူတည် ၍ အမည်နာမပေးခြင်းကို နောက်တစ်ခါ တစ်ဆယ်ဘိုးထပ်မန်းပေးပါမည်။
မိုက်ကယ် (နိုင်ငံခြားရောက်ပြီးနောက် အများသူငှါလေးစားသမှု၍ အမည်ရှေ့ ၌ တပ်ကြကုန်သော ဝိသေသ)
ဂျော်နီ ( အလကားရ၍ တစ်နေ့ တစ်ပက်မှသည် တစ်မူး(no လစ်မစ်တ်(ဘိုလိုရေးမတတ်လို့ ) သောက် နေကြ တုတ်ကောက်နှင့် အရက်သမား၏နာမည်
အောင်ပု (မျိုးရိုးဂုဏ်ကို ထိမ်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့် နာမည်> မှတ်ချက်။ ။ အောင်ပုသည် နာမည်သာပုပြီး> နာမည်မပုပါ)
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု တစ်ယောက်ဘာများ ထင်မြင်ချက်ပေးချင်ပါသလဲ
ကျနော်ကြားဖူးတာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာတွေလိုမျိုး မျိုးရိုးနာမည် မပေးပဲ ကြိုက်သလို နာမည်ပေးလေ့ရှိကြတဲ့ လူမျိုး ဆယ်မျိုးလောက်ပဲ ရှိတယ်ဆိုလားပဲ။ အတိအကျ သိတဲ့သူများရှိရင် ပြောကြပါဦး။
မြန်မာကလေးတဦး မွေးလာပြီဆိုရင် ၉၉%လောက်က မွေးတဲ့နေ့နံကိုက်ပြီး အမည်ပေး ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ ရှင်တော်ဘုရား၏ အမည်သည်ပင်လျှင် သောကြာနေ့ဖွား သောကြာသားမို့ သိဒ္ဓတ္ထ လို့ မှည့်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က နန်းတွင်းမှာ ဗေဒင် ဆရာကျော်တွေ ၇ ယောက်တောင်ရှိနေတာကိုး။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ပြောသလို နေ့နံမကိုက်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်…..
ဘုရားရှင်ရဲ့ ID မှာ ဖော်ပြထားတာက Giving name သိဒ္ဓတ္ထ။ Family Name ဂေါတမ။
Date of Birth မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ခု၊ကဆုန် လပြည့်။ (၁၆၊၂၊၆၈) လို့ပဲဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။။။။။
အနော် သိတာက နာမယ်ဆိုတာ ခေါ်တဲ့သူနဲ့ အခေါ်ခံလိုက်ရတဲ့သူ နားလည်ဖို့ သိဖို့ပဲ လိုမယ်ထင်ထားတာ
အင်းလေ အိမ်ကနေ ဘယ်မှမရောက်ဖူးတော့လည်း…………….. တံခါးပိတ်ထားတဲ့ စနစ်ထဲမှာနေခဲ့ရတာဆိုတော့
ခေါါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆ နဲ့ ဘယ်လာအံဝင်ပါ့မလဲ
ကမ္ဘာပြားပြီဆိုလို့သာ အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်လာခဲ့တာ ဘယ်နေရာ ဘယ်လို ပြားမှန်းတောင်သိသေးတာ မဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်က အဲ့ဒါကို သက်သက်မဲ့ ဗျောင်ကြီး ဝှက်ပြီး ဗေဒင်ကိုညွှန်းထားတာပါ
မြင်တတ်ရမှာက သိဒ္ဓတ္ထ ဆိုတဲ့နာမည်ကို ဘုရားရှင်က သူကိုယ်တိုင် မှည့်ဆိုတာမဟုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပေါ်လွင်စေခြင်လို ခြင်းနှင့်
အမည် မှည့်ဆိုရာ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမည်ခံပြီး တစ်လွဲတွေ ဖြစ်ကုန်တာကို သိကြစေခြင်တာပါ
အခြား အခြားသော အယူစ ဓလေ့တို့ ကတော့ သူတို့ ထုံးစံနဲ့ သူတို့ သွားပေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး
အထူးဆိုလိုဖြင်တာကတော့ အချို့ သော ဓလေ့ရိုးရာတိုင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူဓလေ့ဟူ၍ အလွယ်တကူ မသုံးစွဲစေခြင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ဒါကတော့ သတင်းတစ်ပုဒ်ထဲက သူတို့ အယူအစနဲ့ သူတို့ နာမည်ပေးကြတာပါ
ပလန်းနက်လား ဘာလားတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး..
နာမည်ပေးခြင်းနှင့် ဘာသာစကားအရ အဓိပ္ပါယ်မတူညီတတ်မှု သတိပြုပါ
တကယ်တော့ မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ နာမည်ကို ခန့်ခန့်ညားညား ဖြစ်စေချင်စိတ် ရှိကြတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ ဘာသာစကားအရ ကိုယ့်သားသမီးကို ပေးထားတဲ့ နာမည်ဟာ အဓိပ္ပါယ် ကောင်းနေပေမယ့် တခြားလူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာစကားအရ မကောင်းတဲ့အနက်မျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ တွမ်ခရုစ်နဲ့ ကေတီဟုမ်းလ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ရင်နှစ်သည်းချာ သမီးလေးကို စပိန်ဘာသာအရ လှပတဲ့ နာမည်လေးအဖြစ် ဆူရီလို့ မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားဟာ ဂျပန်လို ခါးပိုက်နှိုက်၊ ပြင်သစ်လို လူ့ချဉ်ဖတ်၊ အီတလီလို အရုပ်ဆိုးတဲ့ငါးလို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်နေတာ သိမယ်ဆိုရင် သူတို့လင်မယားဟာ သမီးလေးကို ဒီနာမည်မှည့်ဖို့ ပြန်စဉ်းစားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ခုဆိုရင် လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘာသာစကားမျိုးစုံကို စုဆောင်းဘာသာပြန်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုက ဒီလိုပြဿနာမျိုး မကြုံရအောင် ကူညီမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါပြီ။ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ပေါင်စတာလင် (၁၀၀၀)ယူပြီး ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်မှည့်ဖို့ ဘာသာစကား အမျိုး(၁၀၀)မှာ ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ နာမည်တွေကို ရွေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုတဲ့ ဘာသာစကားတွေအတွက်ပါ အဓိပ္ပါယ်ကောင်းတာမျိုး ဖြစ်စေချင်ရင် ပိုက်ဆံကို အပိုကြေး ထပ်ပေးရပါတယ်။ Todayလို့ခေါ်တဲ့ အဲဒီဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီဟာ သူတို့ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို Celebrity စုံတွဲတွေက စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ မကြာသေးခင်ကမှ မွေးခဲ့တဲ့ ၀ိန်းရွန်နီရဲ့ ကလေးကို ကိုင်လို့ နာမည်ပေးဖို့ သေချာရွေးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနာမည်ဟာ ဖင်လန်လို အရာရာကို ဖြစ်နိုင်စေတဲ့အရာ၊ အက်စ်တိုးနီးယားလို လှပတဲ့ တံတားလေး၊ အနောက်အာဖရိကတိုက်က ယောရူဘားတွေရဲ့ ဘာသာစကားအရ အရာရာကို ရပ်တန့်သွားစေသူ၊ မြန်မာလို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ချုပ်ထိန်းနိုင်စွမ်းစတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ သက်ရောက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဂွင်းစတက်ဖနီနဲ့ ဂေဗင်ရော့စ်ဒေးလ်တို့လည်း သူတို့သားနာမည်ကို ဇူးမားလို့ ပေးဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ အဲဒါဟာ အာရပ်လို ငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ရှေးဟောင်းအက်ဇ်တက် ဘာသာစကားမှာ စစ်အောင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက တချို့Celebrityတွေရဲ့ သားသမီးတွေကို နာမည်ရွေးပေးတဲ့အခါ မူရင်းအခေါ်အဝေါ်အတိုင်း မဟုတ်တော့ဘဲ နည်းနည်းပြောင်းပြီး ခေါ်ရလွယ်အောင် မှည့်ပေးလိုက်တာတွေ ရှိတယ်လို့ ၀န်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နဲ့ ညီအစ်ကိုတော်စပ်သူ ဂျာမိန်းရဲ့နာမည်ဟာ ဂျာမက်ဂျက်စတီဆိုတဲ့ စကားကို အလွယ်မှည့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပိုစ်တစ်ခုတောင်တင်လို့ရတယ်နော် မိုက်ကယ်…။ ကျွန်တော်နာမည် အာ ဂကရော အခြားတိုင်ပြည်မှာ ဘယ်လိုအဓိပါယ်ထွက်သလဲဆိုတာ လိုက်ရှာရမယ်ထင်တယ်ဗျ..။
မန်ဘာများအနေနှင့် ကျွနု မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ၏ အမည်နာမကို( ဆင်တူရိုးမှား/တိုက်ရိုက်) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သုံးစွဲခြင်းကို ကန့် ကွက်ပြီး
( ဆင်တူရိုးမှား/တိုက်ရိုက်) သုံးစွဲလိုလျှင် ပို့ စ် (သို့ ) ကွန်မန့် ၏ % ပွိုင့်များကို ကျွန်ုပ်ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖစ်ပါဂျောင်း။
မေးငြမ်း ချုံချမ်းခြင်း တီးခံဂျပါ။
နာမည်တော့ သိဝူး ဘကြီးပုရေ… ဘကြီးပုတင်ထားတဲ့ ပုံနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ပုံတော့ BM ကြီးက တင်ထားတာ တွေ့တယ်တော့…:P
ဒီပို့စ်ကို တင်လိုက်တဲ့ ကြောင်ဦးနှောက်တော့ ချီးကျူးပါရဲ့ဗျား…။
ဒီကိစ္စ ဝေေ၀၀ါးဝါးစဉ်းစားနေတာတော့ တော်တော်ကြာပါပြီ။
တကယ် စိတ်ထဲရှိတာပြောရရင်တော့ … အရင်က.. သခင်မျိုးဟေ့ဒို့ဗမာ… ဖြစ်ချင်တာဖြစ်..ပြောချင်တာပြော… ဘယ်လောက်လွတ်လပ်သလည်း..ဂုဏ်ယူမိတာပါပဲ..။
နောက်တော့ အတွေ့အကြုံတွေအရ..ဒါဟာ ယဉ်ကျေးမှုခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့တာလို့တွေးနေမိပါတယ်..။
တကယ်တော့ မိသားစုအမည်ကို ယူသုံးခြင်းရဲ့နောက်မှာ… တဦးစီကိုယ်တိုင်ရဲ့ တာဝန်ယူရမှုလည်းပါလာပါတယ်..။
ဒါကို ခုခေတ် ဥပဒေတွေနဲ့ ချိပ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတေ့ာ .. တော်တော့ကိုအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်..။
လွန်ခဲ့တဲ့တရက်က ကိုညီလင်းဆက် ဘလော့သွားဖတ်ရင်း သူပြုစုထားတဲ့ နာမည်ပေါက်စာရင်းလေးတွေ့လိုပါ..။ ခုတလောက ရွေးခံရတဲ့ အမတ်တွေရဲ့အမည်ကနေ ပြုစုထားတာပါတဲ့..။
အောင်မြင်သူများ အသုံးအများဆုံး အမည်နာမများပေါ့နော..။ ကလေးအမည်ပေးလိုသူတွေစဉ်းစားနိုင်ကြအောင်ရယ်ပါ..။
မူရင်းပို့ စ်ဖတ်ရန် … > http://blog.nyilynnseck.com/2010/12/2010.html
2010 ရွေးကောက်ပွဲမှ ထိပ်တန်းနာမည် စာလုံးပေါင်း ၁၀၀
1. ဦး (1094) (26.74%)
2. အောင် (154) (3.76%)
3. မောင် (148) (3.62%)
4. မြင့် (147) (3.59%)
5. ဝင်း (142) (3.47%)
6. ကျှော (106) (2.59%)
7. ထွန်း (103) (2.52%)
8. သိန်း (77) (1.88%)
9. စိုး (73) (1.78%)
10. စိုင်း (72) (1.76%)
11. တင် (69) (1.69%)
12. တာ (68) (1.66%)
13. ခင် (66) (1.61%)
14. ဒေါက် (64) (1.56%)
15. ခ (54) (1.32%)
16. သန်း (54) (1.32%)
17. လှ (52) (1.27%)
18. နိုင် (45) (1.1%)
19. စော (44) (1.08%)
20. ဒှေါ (41) (1.0%)
21. အေး (40) (0.98%)
22. ဇှော (36) (0.88%)
23. လွင် (33) (0.81%)
24. ဌေး (32) (0.78%)
25. မင်း (32) (0.78%)
26. ကို (32) (0.78%)
27. စိန် (28) (0.68%)
28. ကြည် (28) (0.68%)
29. မြ (27) (0.66%)
30. ဆွေ (25) (0.61%)
31. မျိုး (24) (0.59%)
32. ညွန့် (24) (0.59%)
33. လှိုင် (22) (0.54%)
34. လင်း (20) (0.49%)
35. ရွှေ (20) (0.49%)
36. ဆန်း (15) (0.37%)
37. သူ (15) (0.37%)
38. သောင်း (14) (0.34%)
39. မိုး (14) (0.34%)
40. နန်း (14) (0.34%)
41. ရယ် (13) (0.32%)
42. ဖေ (13) (0.32%)
43. စန်း (13) (0.32%)
44. ခွန် (12) (0.29%)
45. သာ (12) (0.29%)
46. တင့် (12) (0.29%)
47. ရဲ (12) (0.29%)
48. ဘ (11) (0.27%)
49. ဟန် (11) (0.27%)
50. မြတ် (11) (0.27%)
51. အုန်း (11) (0.27%)
52. စံ (11) (0.27%)
53. ခမ်း (10) (0.24%)
54. ထိန် (9) (0.22%)
55. ကြီး (8) (0.2%)
56. ရ (8) (0.2%)
57. ခိုင် (8) (0.2%)
58. ရီ (8) (0.2%)
59. ညို (8) (0.2%)
60. ညီ (8) (0.2%)
61. လေး (8) (0.2%)
62. ငွေ (8) (0.2%)
63. ငြိမ်း (8) (0.2%)
64. သက် (8) (0.2%)
65. နေ (7) (0.17%)
66. မန်း (7) (0.17%)
67. သိမ်း (7) (0.17%)
68. ဇင် (7) (0.17%)
69. နွယ် (7) (0.17%)
70. ဉာဏ် (6) (0.15%)
71. ရှိန် (6) (0.15%)
72. မှော (6) (0.15%)
73. ထန်း (6) (0.15%)
74. ချစ် (6) (0.15%)
75. ဖိုး (5) (0.12%)
76. အင် (5) (0.12%)
77. သန့် (5) (0.12%)
78. စ (5) (0.12%)
79. ယော (5) (0.12%)
80. ရန် (5) (0.12%)
81. ချို (5) (0.12%)
82. ဆန် (5) (0.12%)
83. အိုက် (4) (0.1%)
84. ဇာ (4) (0.1%)
85. ယိန်း (4) (0.1%)
86. ဖုန် (4) (0.1%)
87. သီ (4) (0.1%)
88. ထိုက် (4) (0.1%)
89. လွန်း (4) (0.1%)
90. ထွဋ် (4) (0.1%)
91. ထင် (4) (0.1%)
92. တိုး (4) (0.1%)
93. ထွေး (4) (0.1%)
94. ပြုံး (4) (0.1%)
95. ကြိုင် (4) (0.1%)
96. နီ (4) (0.1%)
97. ချမ်း (4) (0.1%)
98. ဒီ (4) (0.1%)
99. ဆိုင် (4) (0.1%)
100. ပှေါ (4) (0.1%)
101. ဝေ (4) (0.1%)
102. ရည် (4) (0.1%)
103. ကံ (4) (0.1%)
104. ဗိုလ် (4) (0.1%)
105. မာ (4) (0.1%)
106. ကှော (3) (0.07%)
107. မောင်း (3) (0.07%)
108. နန် (3) (0.07%)
109. ရင် (3) (0.07%)
110. ပါ (3) (0.07%)